Xildhibaanka Tiaty oo la xiray | Star FM
Home Wararka Kenya Xildhibaanka Tiaty oo la xiray
Xildhibaanka Tiaty oo la xiray
Waxaa xabsiga loo taxaabay mudanaha laga soo doortay deegaanka Tiaty ee ismaamulka Baringo William Kamket oo lala xiriiriyay dhibaatooyin dhanka amniga ah oo dhawaan saameeyay degmada Kapedo
Mudanaha oo saaka la qabtay ayaa hadda ku jiro saldhigga booliska ee xaafadda Kileleshwa ee Nairobi.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in mudanaha iyo qareenkiisa ay fariin qorayaan.
Toddobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii 6 qof lagu dilay halka dhowr kalena lagu dhaawacay israsaaseyn dhex martay ciidamada ammaanka iyo dabley.
Xarigga William Kamket ayaa ku soo aadaya ka dib markii shalay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang’i uu sheegay inay jiraan shakhsiyaad lagu tuhunsan yahay amni darrada laga soo tabiyay Kapedo oo laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.
Previous articleXubnaha Beesha Caalamka iyo kuwa Soomaaliya oo isku raacay inay Dhaco doorasho la isla ogol yahay
Next articleXisbiga Jubilee oo u hambalyeeyay Biden